Firefox Monitor: tarisa kana iwe wakamborwiswa nekombuta kurwisa | Linux Vakapindwa muropa
Haisi yega sevhisi yacho, asi Mozilla yakaitawo kuti Firefox Monitor iwanikwe kwauri. Mamwe masevhisi aripo anokatyamadza zvishoma, pamwe zvinopa chivimbo chekuti kumashure kweiyi kune Mozilla. Icho chikonzero ndechekuti mamwe eanosemesa masevhisi anogona kushandisa iyo data yavanopinda kuti vazive kuti iwe uri munjodzi uye kugona kuita imwe mhando yekurwisa nayo. Zvakanaka, tataura izvozvo, ngatione kuti chii nezvazvo ...
Mozilla Firefox Monitor inokutendera iwe kuisa yako email kero kuti usiyane nedhatabhesi yavanayo kana vave vakaurayiwa neimwe mhando yekurwiswa kwecyber. Nezve izvi iwe unozogona kuziva kana maakaunzi ako akaverengerwa uye zvitupa, senge password yako, zviripo kune cybercriminals. Saka iwe unogona kuita uye nekushandura matsamba ako kuchengetedza masevhisi ako.
ari matanho aunofanira kutevera Ndizvo:
Log in in the zviri pamutemo webhusaiti.
Chiise email kero iwe unoda kutarisa mubhokisi.
Dhinda bhatani Tarisa Kubuda.
Ipapo vachatsvaga mune dhatabhesi kana paine machisi uye ichakuratidza iwo mhedzisiro. Kana iyo isina kukanganiswa kana kana kero yako yakaverengerwa. Nehurombo, sevhisi inongosvika kune akaomesesa maakaunzi kusvika 2017 ... Saka kana ikarwiswa muna 2018 kana 2019, hapana tsaona ichaonekwa ...
Chii chekuita mushure mekutarisa?
Kunyangwe kero yako isina kukanganiswa kana kuti yave iri, zvinokurudzirwa kushandura password yako uye isa robust. Ndokunge, imwe yeanopfuura mavara masere uye ndiko kusanganiswa kwemavara makuru, madiki, manhamba uye zviratidzo. Hapana kana mazwi akawanikwa muduramazwi.
Pamusoro pekuchinja password, zvingave zvinonakidza kana iwe ukawedzera Nhanhatu-Nhanho Kuongorora mune yako tsamba sevhisi (kana zvichibvira). Nenzira iyoyo, kunyangwe ivo vachigona kukanganisa password yako, hazvizove nyore kuwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Firefox Monitor: tarisa kana iwe wakamborwiswa nekomputa
Microsoft: Chikwata chiri kushanda muchirongwa cheLinux, kuvhura padhuze!